Hayb Sooc: Dhaqan liita oo lid ku ah baniaadamnimada
Hayb Sooc: Dhaqan liita oo lid ku ah bani'aadamnimada
waxa falanqeeyay falanqeeyay
Ismaaciil C. Xasan
Haybsooc waa maanso uu tiriyay Abwaan Maxamed Hirad 18 ka bishiii April ee 2002. Waa gabay ka hadalaya hayb sooca ama sinji takoorka oo ah dhaqan aad u liita oo lid ku ah bani�aadanimada. Waa mid si cad uga soo horjeeda waxyaabaha ay inna farayso diinta Islaamka ee muqaddaska ah ee Soomaalidu aaminsan tahay.
waa dhaqan soo jireen ah oo aan garawshiiyo lahayn ayna ka siman tahay guud ahaanba Soomaalidu meel kasta oo ay ku nooshahay. Waa xad gudub iyo godob weyn oo laga galay qayb ka mid ah Soomaalida oo haba yaraatee aanay jirin wax ay kaga geddisan yihiin bulshada inteeda kale.
Iyadoo haddaba uu abwaanku sidaa u aaminsan yahay sinnaanta bani�aadamka ayaa waxa uu garawsan la�yahay in Soomaalidu ay qaybo bulshada ka mid ah xaqirto, islamarkaana aan laga dhiidhiyin sidii loo cidhibtiri lahaa dhaqankaas silloon ee haybsooca iyo xaqiraada ku dhisan. Waxa uu isaga oo arrintaa ka hadlaya yidhi:
Waxaa in badan la is weydiiyaa waxa ay dadka la hayb sooco kaga geddisany yihiin Soomaalida inteeda kale. Ma midab gaara ayay leeyihiin? Ma af gaara ayay ku hadlaan? Ma diin gaar ayay aaminsanyiin? Ma muuqaal ka duwan soomaalida inteeda kale ayay leeyihiin?
Marka aad u dhabba gasho su�aalahan waxaa kuu soo baxaya sabab la�aanta iyo macno darrada ay aragtida hayb soocu ku dhisan tahay.
Waa su�aal dad weynaha jawaab laga sugaayaaye
Soomaalida siiba kuwa gobnimada ku faanaa kumaanay ekaan Soomaalinimada ay iskula qabka weyn yihiin ee ay walaalahooda kale ku faquuqayaan. Waxaa jirta in beel waliba ay meel kale iyo qawmiyado kale isha ku hayaan sheegtaanna in ay halkaas ka soo jeedaan.
Waa su�aal abwaanada jawaab laga sugaayaaye
�Gabaygan waxaan ka mariyey xaalad soo jireen ah oo Soomaalida dhaqamadeeda xun ka mid ah. Taas oo ah takoorka dadkeenna dhexdiisa ka jira. Waxaa jirtay in aan la yaabi jiray takoorka, in badana isweydiiyay maxaa dhacay oo dadka qaarkiis loo xaqiraa? Hase yeeshee jawaab i qancisa ma helin. Sidaa darteed waxaan rabaa in aan dadka Soomaalida ah gabay ku weydiiyo sababta uu takoorku dexdheenna uga jiro.
Waxa gabaygani soo baxay bishii April, 18, 2002. Laba magac baa gabaygan ku jira. Mid waa ninka aan ku hal qabsaday oo ah Cali Cabdi Nuur (Cali Dhoof) oo jooga dalka Kanada, kan kalana waa Maxamed Xasan �Dillaal� oo aanu isku magaalo deggenahay. Labada ninba waa rag aanu saxiib nahay.�
Gabaygiina waa kan:
Dabadeedna sowdkayga weri, iyo su�aashayda
Waa su�aal dadweynaha jawaab laga sugaayaaye
Waa su�aal dadweynaha jawaab, laga sugaayaaye
Ee socod ammaniyo xarrago soo dejay ee keenay
Ma seegaa la yidhi wiil abtigii suu ahaan jiraye
Saxaafaddii Ismaaciil Miriyo sawdkii Cali dhuux Dheh
Sida uu Dillaal yidhi ra�yigu waa sad qaaliya e
Waxa aad Abwaanka maansada tiriyay kala xidhiidhi kartaa: